Midowga Musharaxiinta oo qaadacay doorashooyinka dalka ka socda | Xaysimo
Home War Midowga Musharaxiinta oo qaadacay doorashooyinka dalka ka socda
Qoraalkaan ayaa sidoo kale lagu cadeeyey in mas’uuliyadda wixii ka dhasha boobka doorashada ay qaadi doonaan madaxda dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada.
“Golaha Midowga Murashaxiinta kulan uga furmay magaalada Muqdisho intii u dhexaysay 25-30/11/2021 ayaa diiradda lagu saaray xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan geeddi-socodka doorashooyinkii la filayey in ay dalka ka qabsoomaan,” ayaa lagu yiri qoraalka.
4- In loo diiday diiwaan gelinta tartanka kursiga xildhibaanno kuraasta hore ugu fadhiyey, iyo kuwo kale oo xaqu lahaa, halka la diiwaan geliyey xubno aan soo buuxinin shuruudihii diiwaan gelinta.
“Haddaba, haddii ay meesha ka baxeen dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta doorashada, waxay doorashadi la sugayey isku bedeshay boob qaawan oo dalka u horseedi kara khilaaf siyaasadeed, xasillooni darri, iyo burbur ku yimaada dawladnimada,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Sidoo kale golaha ayaa war-saxaafadeedkaan ku cadeeyey lix qodob oo ay sheegeen in shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ay u cadeynayaan.